Akukho namnye wethu ovelisa abantwana "ngokungaqhelekanga" - ngamnye unomzekelo othile, icebo, icebo. Kwamanye, imfundo yakhiwa ngomgaqo "wam kunye nam," abanye, ngokuchaseneyo, zama ukuphindaphinda iimpazamo zabazali babo. Ziziphi iindlela eziphambili kunye nezindlela zokukhulisa - ukuhlulwa kwazo kunye nenkcazo ecacileyo zichazwe ngezantsi.
Ukunyanzeliswa kuthathwa njengendlela ebalulekileyo kwimfundo. Isekelwe kwigama, eliye lachaphazela ingqondo nemvakalelo yomntwana ngokufanayo. Kubaluleke kakhulu ukuba abazali bakwazi ukuthetha nendodana okanye intombi yabo.
Kwizenzo zokufundisa, kukho iindlela ezininzi zokukholisa. Le ngcebiso, isicelo, ukubonwa, ukufundiswa, ukuthintela, ukucebisa, ukufundisa, ukuphendula, ukuqiqa, njl. Ngokuqhelekileyo, ukukholelwa kuqhutyelwa kwintlanganiso yodliwano-ndlebe nabazali nabantwana, ngexesha abantu abadala baphendula imibuzo emininzi yabantwana. Ukuba abazali abakwazi ukuphendula umbuzo, kubalulekile ukuvuma le nto kwaye umema umntwana ukuba afune impendulo kunye.
Ngokugqithiseleyo, kukho iingxoxo kubantu abadala, ukuba kuyimfuneko ukuxoxa ngokuziphatha kwendodana okanye intombi, iingxaki zentsapho, njl. Kukho inani lemiqathango ebangela ukuphumelela kwengxoxo yabazali kunye nabantwana babo:
Musa ukuthetha nabantwana kuphela xa kulungele abantu abadala, bengayithobeli ingqalelo yokuba abantwana benza into ethile;
ukuba umntwana uzimisele ukuthetha nabazali bakhe, kuyimfuneko ukumxhasa, ukufumana amagama akhuthaza ingxoxo engqinileyo, ukunyanga malunga nemicimbi yomntwana, kodwa kungekhona nje ukuxubusha uvavanyo lwesikolweni;
ziqwalasele iminyaka yobudala, iimpawu zabo, ziphephe iingxelo malunga nobuchule kunye nomntu omncinci;
kunokwenzeka kwaye kunengqiqo ukuchaza indawo yayo, ukuqonda ukuba kungenzeka ukuba kukho enye imbono, ukuqwalasela iimfuno kunye neengcamango zendodana okanye intombi;
bonisa ubulumko, thintela ithoni yokunyanzelisa, umemeza;
Musa ukuguqula intetho ibe yimpindiselo yeentetho eziqhelekileyo, kwi-monologists ezifundisayo, ungalahlekelwa ngumlinganiselo xa umntwana enenkani emela yedwa.
Kwaye kubaluleke kakhulu - ukuba ingxoxo ibe luncedo, abazali kufuneka bakwazi ukuphulaphula nokuva umntwana wabo.
Kwindlela yokufunda imfundo yentsapho, amaqela amabini eemfuno asetyenziswa. Iyokuqala imfuno ecacileyo, iqondiswe ngqo kumntwana ("Yenza oku kuphela"). Leli qela libandakanya umyalelo ("Uza kuwathambisa iintyatyambo"), isilumkiso ("Uchitha ixesha elide kwikhompyutheni"), umyalelo ("Beka iimidlalo zakho endaweni"), umyalelo ("Yenza lo msebenzi"), umyalelo (" Ukhulume ngenyameko nogogo "), ukuvinjelwa (" Ndiyakukuvumela ukuba ubukele iTV "), njl. Iqela lesibini libandakanya iimfuno ezingekho ngqo, ngokungathanga ngqo, ukuba iinjongo zempembelelo kumntwana zifihliwe, kwaye iimvakalelo kunye nemvakalelo yomntwana ingasetyenziswa. Umzekelo omhle ("Khangela, njengoko umama ayenzileyo"), isifiso ("Ndifuna ukuba usibekelele ngakumbi"), icebiso ("Ndicebisa ukuba ufunde le ncwadi"), isicelo ("Nceda undincede ndibeke izinto ngendlela indlu "), njl
Imfuneko yokuba abazali bonyana okanye intombi baqale ukubonisa ukususela ebuntwaneni. Ngexesha elide, iimfuno zanda: umfundi kufuneka afunde ukugcina ulawulo lwaloo mini, kufuneka akwazi ukunikela izilingo nokuzonwabisa. Nangona kunjalo, kunye neemfuno, abazali kufuneka banikele umntwana ithuba lokuzikhethela ukuziphatha: uye kwiklabhu yekhomputha okanye ukongeza ulwimi oluthile, tyelela umhlobo ogulayo okanye udlale nabahlobo egcekeni, uncedise abazali ekhaya okanye ubukele ividiyo, njl. Umzabalazo weenjongo "ezifunayo" kwaye "kuyimfuneko", ukuzenza izigqibo ezizimeleyo kuncedisa kwimfundo yentando, inhlangano, ukuqeqeshwa. Ukunyaniseka kwabazali kukhawulezisa ukubunjwa kwezi mpawu. Ukuba yonke into evunyelwe kwintsapho kubantwana, ikhula inqwenela, ifuthe, igosa.
Enye yeendlela eziqhelekileyo ezifunwa ngabazali yisicelo. Olu hlobo lokuzibophezela okukhethekileyo kumncinci, inhlonipho ngaye. Enyanisweni, ngokuqhelekileyo isicelo sichaza imfuno engqongqo: "Ndicela ukuba ungaze wenze oku." Isicelo, njengomyalo, sihamba kunye namazwi athi "nceda", "yibani nomusa" kwaye iphele ngoxabiso. Ukuba isicelo sisetyenziswa ngokuqhubekayo njengonyango kwintsapho, umntwana uhlakulela ukuzithemba, isimo sengqondo sokuhlonela umntu.
Njengoko uqeqesho lubonisa, le ndlela kunye nendlela yokukhuliselwa iya kusebenza xa ezi zilandelayo zihambelana:
iimpawu zeempawu zabantwana zithathwa ingqalelo (abafundi abasebancinci baveliswa ngokungenanto ngaphezu kweemfuno ezimbini, nangendlela echanekileyo), iimpawu zabo zesimo sengqondo (omnye kufuneka akhunjulwe, omnye kufuneka avelise imfuno kwifom yeqela);
uchaza intsingiselo yeemfuno, ngakumbi xa evimbela ezinye izenzo;
imfuno ayifani nokuxhaswa okufutshane, kunye nokuthintela ngokusisigxina;
ukulondoloza ubumbano kunye nokuhambelana ekuhambiseni iimfuno ezivela kuwo onke amalungu entsapho;
iindlela ezahlukeneyo zokufuna;
imfuno ibonakaliswe ngokucokisekileyo, ngezwi elizolile, elinobubele.
Iimpembelelo zemfundo zenkqubo yokuzilolonga kusekelwe ekuphindaphindiweyo kwezenzo okanye izenzo. Abafundi abakwaJunior abakwazi ukuthobela rhoqo ukuziphatha kwabo kwimiqathango abayaziyo. Ukuzivocavoca okuqhubekayo kunye kunye nemfuno, ukulawulwa ngabazali kunokukhokelela ekwakheni imikhuba emihle kubantwana.
Imikhwa ibaluleke kakhulu ebomini bomntu. Ukuba umntu uyenze imikhuba emihle, ukuziphatha kwakhe kuya kuba nako. Kwaye ngokuphambene: imikhwa emibi ibangela ukuziphatha okubi. Umkhwa omuhle wenziwa ngokuthe ngcembe, kwindlela yokusebenzisa ezininzi.
Ukuzivocavoca kudlala indima enkulu ekusebenzisaneni nabantwana. Ukuba umsebenzi woqeqesho uhambelana nenani leemfuneko zokuzivocavoca, umfundi uyawamkela njengenyanzeliso. Kodwa ukuba oko kuthethwa kuthiwa kungabonakali kusetshenziswe ekukhuliseni, abaphumelelanga (umfundi unzima ukuphoqeleka ukuhlala ngokuthula, ukuphulaphula ngenyameko, njl.). Imisebenzi yokufundisa kufuneka inikezwe ifomu ekhangayo, inomdla ekuphunyezweni okufanelekileyo komntwana.
Ukuzivocavoca kuyimfuneko yokufunda imilinganiselo yokuziphatha, xa ukudluliselwa kolwazi ngokuphathelele imigaqo yokuziphatha kwisenzo esiqhelekileyo, kuyenzeka ngokuphindaphinda ngokuphindaphindiweyo kwezenzo ezintle nezenzo. Ngokomzekelo, umntwana ubeka kwiimeko xa kukho imfuneko yokwabelana ngamathoyizi, iilekese, ukunyamekela izilwanyana, njl. Kufuneka ukhunjulwe ukuba nenye into embi ingayonakalisa into enhle eyenziwa ngumntwana, ukuba le nto yayimnelise kwaye ayibonakali ngabantu abadala (ukweba, ukutshaya, njl.).
Ngokuqhelekileyo abantu abadala baqala ukuqoqa amathoyizi eneminyaka emithathu ubudala, ngoko babhale iincwadi kunye neencwadi zokubhala esikolweni esincinane, bahlambulule kwigumbi lakhe. Ngenxa yoko, umntwana akenzi kwimisebenzi enenjongo yokuphuhlisa iimpawu ezintle njengokuchaneka, ukugcinwa komyalelo. Ngokuqinisekileyo, oku kukuqala kokuqeqesha, ukuziphatha.
Ukuba ngumzali ngokuzilolonga kuyinkqubo ende engafuneki kuphela isakhono, kodwa nomonde. Ukusebenza kokusebenzisa ukuzilolonga kuxhomekeke kwindlela ekudibanisa ngayo kakuhle nefuthe lomlomo. Igama livuselela isenzo, silungise izenzo ezintle, lunceda umntwana ukuba aqonde indlela aziphatha ngayo.
Impembelelo yomzekelo ekuzaleni umzali isekelwe ekukwazi ukuxelisa abantwana. Abantwana basenalo ulwazi olwaneleyo, banamava ahluphekileyo kubomi, kodwa bawaphulaphula kakhulu abantu kwaye bafumana ukuziphatha kwabo.
Ukuziqhelanisa kubonisa ukuba abazali, ukuhlawula umzekelo kumzekelo omhle, banganyaniseki indima yezinto ezimbi. Abantu abadala bayakhohlwa ukuba abantwana abasoloko beqonda kakuhle oko bahlangabezana nabo ebomini, kwaye bahlala bekholelwa
Imithetho ephambili yondlo olutsha
Indlela yokufunda ukungazibizi abantwana?
Kwingozi yobhiya kubaselula
Uluncedo lwabantwana, izizathu zokulondeka kunye nemiphumo
Iidakamizwa ezisetyenziselwa ukuhlawula i-vasodilation
Iziphoso ezenziwe ngomhla wokuqala
Indlela yokuhlangabezana ngokuchanekileyo iimpawu ze-zodiac ezintsha ze-2017 Cock
Izitya ezimnandi kunye neentliziyo ezinomdla
Iidraphi zokupheka izitya ezilula kunye nezolisayo